Izindaba - Kukangaki kushintshwa izesekeli ze-screw press?
Kukangaki kushintshwa izesekeli zesikulufa cindezela?
Amakhasimende amaningi azobuza ukuthi uzishintsha kangaki izesekeli zesikulufu lapho bezithenga? Kubukeka sengathi ukunakwa komsebenzisi kule nkinga kuphezulu kakhulu. Namuhla, ngaleli thuba, ngithanda ukuphendula le mibuzo ngokuningiliziwe.
Hlaziya ngokucophelela, izesekeli zokucindezela uwoyela zihlukaniswe izingxenye zokugqoka nezakhi. Njengoba igama lisho, ukugqoka izingxenye kuyizingxenye ezidinga ukushintshwa njalo, futhi izingxenye zinempilo ende futhi azidingi ukushintshwa. Izingxenye zokugqoka nezingxenye ezisele zomshini kawoyela.
Izingxenye zokugqoka zesikulufa samafutha cindezela ngokuvamile zifaka: cindezela uthi lokuphotha, cindezela isikulufa, bushing indandatho, bushing, okuphakelayo iqabunga, ikhekhe indandatho, bushelelezi, cindezela ibha, njll
Izingxenye zokucindezela uwoyela ezivuthayo ngokuvamile zifaka: umzimba womshini kawoyela, cage cage, ifreyimu, njll.
Umthamo womshini wokucindezela u-260 ungamathani angama-30-50. Kungani umthamo wokwelashwa uphansi kangaka? Lokhu kunqunywa ikakhulukazi ngokusho kukawoyela. Isibonelo, lapho isikulufa sicindezela amakinati, ubulukhuni bamakinati buphansi, ngakho-ke kulula ukuwucindezela, futhi nokuguga komshini kuncane. Ngakho-ke, umjikelezo wokushintshwa kwezesekeli mude futhi amandla okucubungula makhulu. Uma ucindezela imbewu yekhabe, icindezelwa ngegobolondo. Ubulukhuni bamafutha buphezulu, futhi ukugqoka kwangaphakathi kwegumbi lokucindezela lomshini wokucindezela uwoyela akubucayi. Umjikelezo wokufaka izesekeli uzoba mfushane, futhi amandla wokucubungula azoba mancane. Ngokuvamile, ngaphandle kwezingxenye ezisengozini, umshini wokucindezela uwoyela usetshenziswe iminyaka engaphezu kweyishumi ngaphandle kwezinkinga. Izesekeli zomshini wethu wokucindezela uwoyela zicutshungulwa ukwelashwa ngamahora angama-24 okushisa okuphezulu kwekhabhoni ne-nitrogen. Sinezisebenzi zethu zobuchwepheshe, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile, iqembu lokukhiqiza eliqeqeshiwe neqembu lokuthengisa. I-100% yokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva.
Umshini wokucindezela uwoyela uhlanganiswe ikakhulukazi ekamelweni lokucindezela, ifreyimu, ibhokisi lamagiye, isikulufa sebanga eliphelele ne-port port. Ezinye izesekeli kushaft yabezindaba nakwibhokisi lamagiye kulula ukuzishintsha. Lezi zesekeli ikakhulukazi isikulufa shaft, isikulufa cindezela, ulwelwesi indandatho, bushing, ikhekhe indandatho, ishibhi, umshini wokucindezela, isondo elikhulu nelincane lamagiya, ukuthwala, umkhono we-shaft, njll. slag, noma ukukhishwa okuphansi, akukho okokusebenza, okungukuthi, izingxenye zomshini wakho ziyagula futhi zidinga ukushintshwa.
Isikhathi Iposi: Jan-06-2021
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Yonke Imikhiqizo Umshini Wokucindezela Uwoyela, Umshini Wokucindezela Uwoyela Omncane, I-Olive Oil Press, Umshini Wokucindezela u-Cold Press, I-Oil Expeller, Umhlwanyeli Wembewu Yembewu,